Otu esi etinye VLC Media Player na Pop!_OS 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye VLC Media Player na Pop!_OS 20.04
Usoro 1. Wụnye VLC na APT Manager
Ụzọ 2. Wụnye VLC Media Player na Snap (Snapcraft)
Usoro 3. Wụnye VLC Media Player na Flatpak
Otu esi ewebata VLC Media Player Client
N'ime nkuzi a, ị ga-eme ya mụta ka esi etinye VLC Media Player na POP!_OS 20.04 sistemụ arụmọrụ gị.
Nhọrọ nke mbụ bụ iji ebe nchekwa dabara adaba nke Pop!_OS 20.04. Nke a bụ ụdị kwụsiri ike yana echekwara. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịbụ ntakịrị oge ọ ga-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-azụta onye ọkpụkpọ.
Ozugbo arụnyere, kwado ụdị nrụpụta ahụ, nke ga-achọpụtakwa na nrụnye ahụ gara nke ọma.
A na-ejikwa ọkọlọtọ emelite mmelite dabara adaba & kwalite iwu.
Ọ bụrụ na ịchọghị ka etinye VLC na APT, jiri iwu na-esonụ wepụ ngwugwu ahụ.
Nke a ga-ewepụ ihe ndabere ọ bụla ejighi ya na-akpaghị aka nke etinyere na mbụ ya na ngwungwu isi.
Ọzọ, tinye ngwungwu VLC Media Player site na iji snap:
Dị ka n'elu, nke a na-agwa gị na VLC Media Player arụnyere nke ọma na mbipute nọmba.
Ka ilele akara ngosi VLC Media Player, ị nwere ike ịbanye na pụọ ​​na nnọkọ gị ma ọ bụ jiri iwu njedebe na-esote.
Ileghara ihe dị n'elu anya ma ọ bụrụ na akara ngosi VLC Media Player dị. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ahụhụ a nwere ike ime mgbe ị na-etinye ngwugwu ọhụrụ.
Ugbu a wụnye VLC Media Player site na iji iwu flatpak na-esonụ:
Iji wepu ụdị Flatpack nke VLC Media Player, mee iwu a:
ụdị "Y," wee pịa "ENTER KEY" ka ịga n'ihu na iwepu VLC site na iji Flatpack.
Ugbu a na ị nwere VLC player arụnyere, launching VLC nwere ike mere ụzọ abụọ.
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > VLC media player. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ ị na-emeghe VLC media player, ị ga-ekele na Amụma nzuzo na ịnweta netwọkụ gbapụta.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ịwụnye VLC Media Player na Pop!_OS 20.04 site na iji ụzọ atọ. Nke kacha akwadoro bụ ụdị APT ma ọ bụ Flatpak. Awụnyere ndị njikwa ngwugwu abụọ a na Pop!_OS 20.04, ebe Snap bụ onye mbịarambịa.
N'ozuzu, VLC Media Player bụ nnukwu mmemme, otu n'ime ihe ndọghachi azụ bụ ọnụ ahịa. VLC Media Player na-akwụ onye ọrụ ụgwọ, yabụ na ọ na-aghọ ihe ndọghachi azụ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị nweta narị ole na ole na puku ole na ole. N'ihi ya, naanị ụlọ ọrụ na-eji ya na-akwụ ụgwọ maka ikike. Ọtụtụ obere azụmaahịa na otu mmepe enweghị ike ịkwụ ụgwọ maka njirimara adịchaghị mma. Otú ọ dị, a ka nwere ike iji ya n'efu na-adị mfe ma ọ bụrụ na ịnakwere na-efunahụ ihe ole na ole.
Ị nwere ike inyocha na ịmụtakwu banyere VLC Media Player site na ịga na ibe akwukwo maka ozi ndị ọzọ.